Maamulka Göteborg oo codsaday in dib loo soo celiyo dhaqaalihii ku baxay mashruucii xarrunta geela ee Göteborg | Somaliska
Maamulka goblka Göteborg, ayaa codsaday in dib loo soo celiyo dhaqaalihii ku baxay mashruuc xarrun geel oo Göteborg laga hirgeliyo. Arrintan ayaa salka ku heeyso qabyo iyo habacsanaan ku yimid dhismaha xarruntaasi.
Maal gelinta mashruucan oo gacan badan ka geeysteen hey’ado kala duwan oo hoos yimaada gobolka sida xaafiska shaqada, ayaa haatan muuqda mid aan la dhameeystirin arrimo badan oo is biirsaday aawgood. Tanina waxaa ay keentay in maamulka yiraadaan dib ha loo soo celiyo lacagtii ku baxday.
“Dabcan dib baa loo soo celinayaa lacagta haddaan la isticmaaleeyn, kooxduna waa kuwo fahansan arrintan, si fiicana uma aaneey hirgelin, mana ahan wax la yaab leh” ayey tiri Marina Johannson oo madax u ah hey’adda Social resursnämnd oo ka mid ah hey’adihii dhaqaalaha ku taageerayey fulinta mashruucan, waxaana ay hoosta ka xariiqday in haddii kooxda mashruucan fulineeysa ay dar dar galiyaan ay markale dib u soo codsan karaan.
Siyaasiinta gobolka oo ka shariya bishan abriil sagaalkeeda ayaa soo saari doona go’aan kale oo la xirriira taabo gelinta mashruucaasi haddii uu yahay mid mudan in lugu bixiyo dhaqaale kale iyo inkale. Jonas Rangård oo xisbiga Moderaterna u fadhiya maamulka degmadda ayaa soo dhaweeyey go’aan dib lugu so celinayo lacagta la geliyey mashruuca geela.Waxaana uu tilmaamay ineeysan u muuqan mid sidii la filayey isbadal xaga abuurka ah u keeni kara.
Mashruuca xarrun geela lugu hayo oo loo soo daawasho tago ayaa koox Göteborg ku dhaqani waxaa ay sheegeen bilowgii sanadkan ineey sameeynayaan mashruuc xitaa dad badan shaqo u abuuraya sida soomaalida oo qaarkood ay sheegeen ineey geela dhaqan jireen.
Arrintan ayaa xitaa waxaa buuq ay ka dhex dhalisay soomaalida Göteborg oo qaarkood sheegay ineey tahay mid lugu dilayo sumcada soomaaliduna aan geel wada dhaqan. Si kastaaba ahaatee mashruucan ayaa waxaa ku baxay lacag dhan nus malyan oo lacagta karoonka ah. Ugu dambeyntiina codsiga dib u soo celinta lacagta mashruuca ayaa ku soo beegmeeysa xilli ay weli jiraan da daalo lugu doonayo in dhidibada si rasmi ah loogu taago hase ahaatee ay habacsanaani ku timid.